आधुनिक समयमा पढने शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । परम्परागत रुपमा पुस्तक पढने, पुस्तकालय धाउने र रटने शैली अचेल फेरिएको छ । प्रविधिको विकासले इ–माध्यम मार्फत पढने शैलीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । तर, विश्वमा यस्ता पुस्तकालयहरु छन् जसले पाठकलाई पुरानै शैलीमा पढन उत्प्रेरित गरेका मात्र छैनन कि त्यस्तो
फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गले एउटा राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनीले लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको विवरण लिएको विषयमा आफ्नो कम्पनीको गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । राजनीतिक लाभका लागि केम्ब्रिज एनालिटिकाले गलत तरिकाले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको सूचना लिएको आरोप लागेको छ। केम्ब्रिज एनालिटिकाले
स्तनपान गराउँदै गरेकी आमाको फोटो चर्चामा
मिडियामा प्रकाशित हुने सामग्रीले पाठक तथा स्रोता वर्गलाई सुसूचित एवम् शिक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । तर कहिलेकाही तिनै विषय समाजको हितविपरित भएको भन्दै टिकाटिप्पणी उठने गरेका छन् । एउटा भारतीय पत्रिको कभर पृष्ठमा छापिएको मोडलको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । बच्चालाई निवस्त्र स्तनपान
रेडियोमा लाइभ कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा बच्चा जन्माएपछि...
अमेरिकामा एक रोडियो कार्यक्रम सञ्चालिकाले लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैगर्दा बच्चा जन्माएकी छन् । अमेरिकाको सेन्ट लुइसमा रहेको ‘द आर्च’ रेडियो स्टेसनकी कार्यक्रम सञ्चालिका क्यासीडे प्रोक्टरले लाइभ कार्यक्रम सञ्चानल गरेकै बेला सन्तान जन्माएकी हुन् । यो कार्यक्रम चलाउनका लागि स्टेशनमा विशेष
एकै परिवारका दानवीरले गरे बसपार्क निर्माण गर्न झण्डै डेढ करोडको जग्गा दान
मिलन विक्रम सिंह बस्नेत , भोजपुर ८, फागुन । षडानन्द नगरपालिकामा बसपार्क निर्माणका लागि स्थानीय बस्नेत परिवारले रू. १ करोड ३७ लाख मूल्य बराबरको ९ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई दान दिएका छन् । षडानन्द नगरपालिका– ७ गडीगाउँका शान्ति बस्नेत र महेन्द्र बस्नेतको परीवारले जग्गा दान दिएको नगरपालिकका मेयर विरवल
क्युबाका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोका जेठा छोराले आत्महत्या गरेका छन्। क्युबाका सरकारी सञ्चारमाध्यमले बिहीबार बिहान फिडेलका जेठा छोरा ६९ वर्षीय क्यास्ट्रो डाइज बलार्टले घरमै आत्महत्या गरेको पुष्टि गरेका छन्। डिप्रेसन भएका उनको लामो समयदेखि चिकित्सकहरुले उपचार गरिरहेका थिए। रुसमा आणविक
म्यूजियमले ट्रम्पलाई सुनको शौचालय सुझाएपछि...
न्यूयोर्क । न्यूयोर्कस्थित गगेनहेम संग्रहालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इच्छाएका वेन गोग पन्टिङ प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको छ । संग्राहलयले विकल्पमा सुनको ट्वाइलेट ह्वाइट हाउसका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, ट्रम्प संग्राहलयका प्रमुखसँग ह्वाइट हाउसमा
बाबा रामदेब अदालतमा
माघ १२, नयाँ दिल्ली (भारत) । भारतीय योगगुरु बाबा रामदेवले आप्mना पूर्व साझेदार स्वामी करमवीर विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन् । पतञ्जली आयुर्वेदले करमवीरको कम्पनी कल्पाम्रित आयुर्वेद प्रा. लि. विरुद्ध ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । पतञ्जलीको हुबहु नक्कल गरेर ग्राहकलाई झुक्याउने
दुइटा बिहे नगरे जेल जानुपर्ने
कतैको बोली कतैको गाली भने जस्तै कुनै देशको कानून अर्को देशका लागि खुला उपभोग हुन्छ । नेपालमा बहुविवाह कानूनतः प्रतिबन्धित छ । एकभन्दा धेरै श्रीमती बनाउने पुरुषलाई कारबाही गरिन्छ । तर, अफ्रिकी देश इरिट्रियामा चाहिँ एउटा पुरुषले अनिवाई दुइटा बिहे गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यहाँ महिलाको तुलनामा पुरुषको
काठमाडौं,— शीतकालीन ओलम्पिक शुरू हुनुअघि नै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया समाचारमा खुबै छाएका छन् । उत्तरका नेता किम जोङ–उनको पूर्वप्रेमिकाका विषयमा अहिले हल्लाखल्ला भइरहेको छ । शीतकालीन ओलम्पिकको तयारीका जानकारी लिनका लागि उत्तरको प्रतिनिधिमण्डल सउल पुगिसकेको छ । प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व किमकी
आशोको रहस्यमयी निधन
ओशोको जीवन जति रहस्यमयी थियो, उनको मृत्यु पनि उत्तिकै रहस्यमयी छ । उनको मृत्युको १८ वर्ष पुरा भएको छ । सन् १९९० आजकै दिन उहाँ यस दुनियाँबाट सधै विदा भएका थिए । यसै अवसरमा उनको जीवन लीलाबारे बीबीसी हिन्दी अनलाइन संस्सकरणले तयार गरेको यो सामग्रीः ओशोको जन्म महान गुरु ओशोको जन्म ११ डिसेम्बर, १९३१ मा
न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू गर्भवती भएको घोषणा गरेकी छन्। सरकार प्रमुखले आफूले पदीय जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा बच्चालाई जन्म दिन लागेको यो विरलै घटना हो। यसअघि बेनेजिर भुट्टोले सन् १९९० मा आफू पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। उनले बच्चा जन्मिएको
हुम्लामा विद्युत र सञ्चार सेवा ठप्प
दाने बोहरा/हुम्ला । हुम्लामा हिजाबाट विद्युत र सञ्चार सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण अध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । विद्युत नहुँदा सञ्चार सम्पर्कमा समस्या भएको छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । सञ्चार अवरुद्ध हुँदा सुचना आदान प्रदानमा समस्या
अफगानिस्तानमा आत्मघाती हमला: कम्तिमा ४० को मृत्यु, ३० घाइते
एजेन्सी: अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती हमलामा ४० जना सर्वसाधरण मारिएका छन् । यो घटनामा कम्तिमा पनि ३० जना घाइते भएका छन् । यो आत्मघाती हमला एक शिया सांस्कतिक केन्द्रमा भएको हो । यस हमला अहिलेसम्म कसैले जिम्मा लिएको छैन । तालिबानले एक विज्ञप्ती निकाल्दै यो हमलामा आफू सं‌लग्न नरहेको बताएको
अफगानिस्तानको खुफिया एजेन्सीमा आक्रमण, १० को मृत्यु
एजेन्सी । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको एक गुप्तचर संयन्त्र (खुफिया एजेन्सी)को परिसरमा आत्मघाती विष्फोट भएको छ । अधिकारीहरुले विष्फोटमा १० जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् । विष्फोटमा ५ जना घाइते पनि भएका छन् । गुप्तचर एजेन्सीका कर्मचारी कामका लागि गइरहेको समयमा आक्रमणकारीले आफैसँग भएको विष्फोटक
गुजरात र हिमाञ्चलमा भाजपाको अग्रता काँग्रेस पछ्याउँदै
भारतको गुजरात र हिमाञ्चल प्रदेशमा भएको विधानसभा चुनावको मतगणना सोमबार भइरहेको छ । प्रारम्भिक नतिजामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी बिजेपीले अग्रता लिएको छ । एक सय ८२ विधानसभा सिट रहेको गुराजतमा मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आउँदा बिजेपीले एक सय ६ सिटमा अग्रता लिएको छ । यस्तै राहुल
कन्डमको विज्ञापन अबेर राति
नयाँ दिल्ली, भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा अबदेखि कन्डमको विज्ञापन राति अबेरपछि मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाले कन्डमको विज्ञापन हेर्न अनुचित हुने भन्दै कन्डमको विज्ञापन अबेर राति मात्रै प्रसारण गर्न मिल्ने नयाँ प्रतिबन्ध सोमबारबाट लागू गरिएको बताइएको छ । नयाँ प्रतिबन्धअनुसार
७० प्रतिशत अमेरिकी युवा अर्को राजनीतिक दल चाहन्छन्
वासिङ्टन, अमेरिकाका करिब ७० प्रतिशत युवाले हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका दुई राजनीतिक दललाई मन नपराएको र अर्काे दल चाहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षणकाअनुसार अमेरिकामा हाल रहेका डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन भन्दा अर्कै दल चाहेको उनीहरुले बताएका थिए । ती दुई राजनीतिक दलले अमेरिकामा राम्रो
इरान र इराकको सीमा क्षेत्रमा ७.३ रेक्टरको भूकम्प, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३३५ नाध्यो
काठमाडौं २७, कात्तिक, । इरान र इराकको सीमा क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३३५ नाघेको छ भने २ हजार ८ सय जना घाइते भएका छन् । ७ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट इरानका १४ राज्य प्रभावित भएका छन् । अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेका अनुसार इरानको कुर्द शहर हलबजा भन्दा ३२ किलोमिटर दक्षिण पश्चिम
अमेरिका टेक्सासस्थित चर्चमा गोलीकाण्ड, २७ जनाको मृत्यु
अमेरिकाको टेक्सासस्थित एउटा चर्चमा आइतबार भएको गोली काण्डमा २७ जनाको मृत्यु भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । चर्चमा स्थानीयहरु प्रार्थना गरिरहेको बेला भित्र छिरेका बन्धुकधारीहरुले अन्धाधुन्द गोली चलाउदा २ दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ । स्थानीयहरू जम्मा भएको एक चर्चमा
सेनिटरी प्याडको विज्ञापनमा रगत
मानव रगत कस्तो छ? जवाफ सबै रातोका लागि जान्छ। त्यसपछि किन सेनेटरी प्याडहरूमा विज्ञापन रातो रगतको सट्टा नीलो धब्बा देखाउँछन्? सम्भवतः किन समाजको समयको बारेमा कुनै सादगी र खुलापन छैन। तर अहिले यो हुनेछैन। #PehlaPeriod: ‘जब Papa लाई भन्यो, त्यो जिप गए’ शरीरको स्वरूप बेलायतीको पहिलो ब्रान्ड भएको छ, जसले आफ्नो विज्ञापनमा
९ सय जनासँग सेक्स गर्ने युवतीको अफर बैंकले पत्याएपछि
एजेन्सी एक बेलायती युवतीले अहिलेसम्म आफुले ९ सय जना व्यक्तिसँग सेक्स गरेको खुलासा गरेकी छिन् । ब्रिटेनको डर्बीशायर शहरकी युवती रेबेकाले अहिलेसम्म करीव ९ सय पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको दाबी गरेकी हुन् । रेबेकाको बारेमा उनको परिवारलाई सबै कुरा जानकारी छ । रेबेका ब्रिटेनकी तमाम वेश्यामध्येकी एक मशहुर
माओवादपछि क्रान्तिकारी सी ‘जिनपिङवाद’, सी माओपछिका शक्तिशाली नेता
काठमाडौं ।चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचारले अब ‘वाद’ अर्थात ‘दर्शन’को रुप लिने भएको छ । चीनको संविधानले उनको विचारधारालाई संविधानमा समावेश गर्ने भएपछि सी को विचारले २१ औं शताब्दीको समाजवादका रुपमा व्याख्या हुने टिप्पणी विश्वका मिडियाहरुले गरेका छन् । उनको विचारले अब माओवादको दर्जा पाउने विश्लेषण
टानमा दाहाल विजयी
काठमाडौं १३, कार्तिक । ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा नवराज दाहाल विजयी भएका छन् । टानको आइतबार सम्पन्न ३९औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनबाट प्रतिप्रर्धी मोहन लम्सालाई १८ मतले पछि पार्दै उनी विजयी भएका हुन् । दाहालले ३ सय ३१ मत प्राप्त गरेका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नुरु
मलेसियामा तामिलसँगको विवादमा छुरा हानाहान भएको केही समयपछि ८ नेपाली बेपत्ता भएका छन्। गत अगस्त २९ मा तामिल मुलका व्यक्तिसँगको झगडामा छुरा हानाहान भएको र त्यस घटना लगत्तै ८ नेपाली सम्पर्कबाहिर छन्। बेपत्ता हुनेहरुमा सप्तरीका एक, सर्लाही र सुनसरीका दुई/दुई र महोत्तरीका तीन युवा रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको
विदेशमा बस्ने नेपालीले भाषा संस्कृति बचाउन नसके पहिचान गुम्छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो भाषा संस्कृति बचाउन नसके पहिचान गुम्ने भएकाले त्यसको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले शनिवार यहाँ आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा उनले विभिन्न अवसरका लागि विदेशमा